Gabar Isku Dal-Dashay Xaafad Ka Tirsan Magaalada Muqdisho | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Gabar Isku Dal-Dashay Xaafad Ka Tirsan Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa laga helayaa Gabar dhalinyaro ah oo Maanta oo sabti ah isku dal-dashay Guri ku yaalla xaafad ka tirsan degmada Deyliine ee Gobolka Banaadir, sida wararka ay ku heshay Idaacada Radio Baidoa.
Gabadhaan oo 15 sano jir aheyd ayaa kunooleyd Xaafada saban-saban ee degmada Deyniile, isla markaana is dal-dashay, kadib markii xariga qoorta isaga xirtay, sida ay sheegeen dad dul-tegay Meydkeeda.
Sidoo kale Gabadhan ayaa kamid aheyd dadka Baracayaasha ah, waxaana lagu magaceeda lagu soo gaabiyay oo kaliya Farxiyo, iyadoona markii hore guriga loogu tagay, iyada oo meyd ah oo qoorta xariga uga jiro.
Ehelada gabadhan is dal-dashay ayaa sheegay in aysan ogeyn sababta rasmiga ah ee gabadhan isku dal dashay, waxa ayna sheegeen in kaliya ogaayeen gabadhan oo hooyadeed ku cadaadineysay in telefoon u gado hooyadans u sheegtay in aysan awoodin.
Dhacdadaan ayaa Maanta siweyn waxaa looga hadlayaa xaafadda saban-saban ee degmada Deyniile ee Magaalada Muqdisho, waxaana dadka qaarkood oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen inay falkaas aad uga naxeen.